Asian Traveler: May 2009
တတိယအကြိမ်မြောက် Planet User များ၏ ကထိန်နှင့် ပရဟိတအလှူ
တတိယအကြိမ်မြောက် Planet Online User များ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် ကထိန်ကို ခရစ်နှစ် 2009 ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့ (စနေနေ့) တွင် ကျင်းပသွား မည်ဟုသိရသည်။ ပလန်းနက်မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ အခြားသော အွန်လိုင်းယူဇာများ၊ စေတနာရှင်အလှူရှင်များ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူရင်း အွန်လိုင်းမောင်နှများ၏ပီတိကို မျှဝေခံစားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အဆိုပါ ကထိန်ပွဲကို ကျင်းပရန်စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု လှူဒါန်းမည့် ကော့ထင်း ပရဟိတလူငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း တည်နေရာမှာ ကျိုက်ထိုမြို့၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် (ဖုန်း- ၀၅၇ ၅၀၃၁၉) ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှ ကျိုက်ထိုမြို့အ၀င် မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၀၀၊ ကျိုက်ထိုမြို့ မီးရထား သံလမ်းအကျော်မှ မြေသားလမ်းလေးအတိုင်း (၃)မိုင်ခန့် ၀င်ရောက်လျှင် တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ကော့ထင်း ပရဟိတလူငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းဆရာတော်မှာ သတ္တမဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တ ဒေသိန္န​(ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်) ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကော့ထင်း ကျောင်းတော် တွင် ဆရာတော် (၁)ပါး (ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်)၊ ဦးပဇင်း (၈)ပါး၊ ကိုရင် (၂၇)ပါး၊ ပရဟိတကျောင်းသား ။ သူ(၄၂၇)ဦး၊ ဆရာ (၁၁)ဦး၊ ဆရာမ (၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၈၂) ရှိပါသည်။
ကထိန်အလှူငွေများကို ဘဏ်မှသော်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း ပေးပို့ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ရန် အတွက် အောက်ပါ သက်ဆိုင်ရာ ယူဇာများ၏ အမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များ၊ Gtalk လိပ်စာများမှာ သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်း - 09 9971247
ရိုးမဘဏ် (ဘုရင့်နောင် ဘဏ်ခွဲ)
ဖုန်း - 01-900123၊ ၅၀၁၆၇၇၁၊ ၅၀၁၆၇၈ (ရုံးချိန်အတွင်း)
(M.O.B Bank) လှိုင်မြို့နယ်၊
(KBZ Bank) ပြည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
ဖုန်း - 652232၊ 652324 (ရုံးချိန်အတွင်း)
(M.O.B Bank) လှိုင်မြို့နယ်။
ဖုန်း - 541390၊ 542972 (ရုံးချိန်အတွင်း)
ရန်ကင်းရိုးမဘဏ်ခွဲ၊ ရွှေဂုံတိုင် KBZ Bank
ဖုန်း - 295886၊ 200399 (ရုံးချိန်အတွင်း)
၁၂/မရက(နိုင်)၀၃၁၈၂၂၊ ၂၉၇၆၈၈ (ရုံးချိန်အတွင်း)
မန္တလေး ရိုးမဘဏ် (ရတနာပုံဘဏ်ခွဲ)
ဖုန်း - 02-80322, 80211
ဖုန်း - 09 2018506
Nice Cyber Cafe`
73 Street, Between 27 & 28 Street
ဖုန်း - 09 2029884
Planet User များမှာ ယခင်နှစ်များတွင်လည်း ၀ါဆိုသင်္ဃန်း၊ မိဘမဲကျောင်း၊ ရွာသာကြီး စိတ်ရောဂါ အထူးကု ဆေးရုံ စသည်တို့ကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ အွန်လိုင်းမှ အလှုရှင်များနှင့်အတူ လှူဒါန်းနေသော အသင်းအဖွဲ့ မဟုတ်သည့် စေတနာရှင်များ ဖြစ်သည်။
ဘနျတုံး ရပေူစမျးသို့တဈခေါကျ (Bentong Hot Spring)
ဒီတဈခေါကျတော့ ဘနျတုံး (Bentong) မွို့ရှိ ရပေူစမျး ကိုရောကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ Bentong ရပေူစမျးဟာ ကှာလာလမျပူ ကနပွေီး Raub ကိုသှားတဲ့ လမျးမှာရှိတာပါ။ Raub ကိုမရောကျခငျ Bentong မွို့ကို အရငျရောကျပါတယျ။ Bentong မွို့က Pahang ပွညျနယျအပိုငျထဲမှာပါ။ Bentong ကိုသှားတဲ့အခါ လမျး ၂လမျးရှိပါတယျ။ တဈခုက ပုံမှနျသှားနကြေ ဟိုငျးဝေးလမျးမကွီးပါ။ နောကျတဈခုကတော့ တောငျတှကေို ပတျပွီး သှားရတဲ့ လမျးဟောငျးပါ။ Bentong ရပေူစမျးက လမျးဟောငျးမှာ တညျရှိတာပါ။ ကှာလာလမျပူကနပွေီး တဈနာရီနဲ့ မိနဈ လေးဆယျလောကျပဲ မောငျးရပါတယျ။ ရပေူစမျးကိုရောကျတဲ့ ဘတျဈကားတော့မရှိပါဘူး။ ကိုယျပိုငျကား၊ ဒါမှမဟုတျ အငှားကားနဲ့ သှားရတာပါ။ Bentong ရပေူစမျးနားမှာ ညအိပျတညျးခိုပွီး တောတောငျ သဘာဝအလှကို ခံစားလိုသူတှအေတှကျလဲ ရပေူစမျးနားမှာ ဟိုတယျတှရှေိတဲ့အတှကျ အဆငျပွပေါတယျ။
Raub, is one of the oldest towns in the State of Pahang. It began asagold mining town in the early 19th century. Remains of its colonial past are evident in the old buildings scattered around the town.
To get from Taman Negara National Park, get to Jerantut and head weat towards Benta where you will join Route 8. Head south to get to Raub.
ရာဝတျမွို့သို့ ခရီးသှားခွငျး (Raub)
Raub မွို့ရှိ ပနျးခွံအဝငျဝ
ရာဝတျ (Raub) ကို အလုပျကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ရောကျသှားတယျ။ အလုပျကိစ်စပွီးတော့ အလညျပေါ့။ ကြှနျတေျာ့ရုံးက သူငယျခငျြးက အဲဒီ့မွို့သားဆိုတော့ သူက မွို့ရဲ့သာယာလှပတဲ့ နရောတှကေို လိုကျပို့တယျလေ။ ရာဝတျ မွို့လေးက ကှာလာလမျပူနဲ့မတူပဲ တဈမူထူးခွားလှပတဲ့ မွို့တဈမွို့ပါ။ ဒီမွို့လေးက မလေးရှားနိုငျငံ အနောကျဘကျခွမျးက ပါဟနျး (Pahang)ပွညျနယျထဲမမှာ တညျရှိတာပါ။ မလေးရှားနိငျငံကှာလာလမျပူမွို့ ရဲ့မွောကျဘကျ မိုငျ၅၀ (၈၀ ကီလိုမီတာ) အကှာမှာရှိတာပါ။ သာယာလှပတဲ့တောတောငျတှေ ဝနျးရံထားတဲ့ မွို့တဈမွို့ပါ။ ကှာလာလမျပူကနေ ဘတျဈကားနဲ့သှားမယျဆိုရငျ ၂နာရီနဲ့ မိနဈ၃၀ လောကျပဲကွာပါတယျ။
မီးတိုင်လေး မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်နဲ့
(အမေသို့ . . . .)
*ကျွန်တော့်ဆီကို Forward Mail နဲ့ရောက်လာတဲ့ စူးရှလင်းလက်ရဲ့ မေလ(၁၀)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မည့် အမေနေ့ အမှတ်တရကဗျာလေးပါ အမေနဲ့ဝေးမှ အမေ့မေတ္တာကို ပိုမိုနားလည်မိလို့ ဒီကဗျာလေးကို အားလုံးအတွက် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်တာပါ*
ထောက်ကြံ့မိဘမဲ့ကလေး ကျောင်းသို့ အလှုခရီး
တက်ညီလက်ညီနဲ့ ချီတက်ကြပြီလေ။ ကိုထက်က ကိုဟန်နဲ့ အထုပ်ချင်း လဲကိုင်လိုက်တယ်။
တတိယအကြိမ်မြောက် Planet User များ၏ ကထိန်နှင့် ပရဟိ...